Ezona lwimi zibalulekileyo eIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Ezona lwimi zibalulekileyo eIndiya
maruuzen | | Indiya
Indiya lelinye lawona mazwe makhulu kwaye anabantu abaninzi ehlabathini. Inokungaphezulu kwe- Abemi abali-1.400 lezigidi kwaye lilizwe lesixhenxe ngobukhulu emhlabeni. Ingxilimbela yokwenene. Ewe, abantu abaninzi bathetha iilwimi ezininzi, enyanisweni, siyazibuza ... zintoni Ezona lwimi zibalulekileyo eIndiya?
Kwilizwe kuthethwa iilwimi ezingaphezulu kwamashumi amabini kuba kukho imimandla eliqela, kodwa singenza uluhlu olufutshane kwaye siziququzelele kuluhlu lwezona lwimi zibalulekileyo. Ke, sinokuzinciphisa ziye kwi-10.
Siqala nge Olona lwimi ludumileyo kuzo zonke kwaye oyena mntu uthetha elona lizwe. Kubalwa oko Abantu abazizigidi ezingama-336 bathetha isiHindi. Oko kubonisa i-40% yabemi belizwe liphela, ke inani elikhulu lezithethi lolunye lweelwimi ezimbini ezinesimo "esisemthethweni".
IsiHindi sithetha eRajasthan, Uttarakhand, Delhi okanye eBihar, umzekelo. I-Hindi lulwimi olunemvelaphi elandelwa emva kulwimi oluthethwayo naseDelhi kumaxesha amandulo. Ngaphambi kokumiselwa komgangatho ojikeleze ulwimi lwaseDelhi bekukho ezinye izinto ezahlukileyo, kodwa ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX ukuya phambili, i-Hindi yanamhlanje yaqala ukuvela kwaye yathandwa ngakumbi xa iikholoniyali zase-Bhritane zayithatha njenge-lingua franca.
Namhlanje lulwimi olusemthethweni kumazwe alithoba nakwimimandla emithathu kwaye, njengoko besitshilo, lolunye lweelwimi ezimbini ezisemthethweni zikazwelonke (esinye isiNgesi).
Nguye ulwimi lwesibini oluthethwa kakhulu eIndiya emva kweHindi. Kukholelwa ukuba yi-8% yabemi abayithethileyo kwaye ke kunjalo Izithethi ezingama-83 egxile ikakhulu kwimpuma yelizwe.
Olu lwimi lukhule ngaphezulu kweminyaka eyi-1300, kodwa ifom yangoku yaqala ngenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX. Namhlanje lulwimi olusemthethweni eBangladesh Kwaye nangona kuthethwa ikakhulu kwiindawo ezithile zaseIndiya kukwakho nabambalwa kwizixeko zaseIndiya ezinje ngeDelhi, iMombai okanye iVaranasi.
Iingcali zithathela ingqalelo lolona lwimi lwesibini luhle emhlabeni emva kwesiFrentshi, kunye noSuku lwaMazwe ngaMazwe loLwimi lweNkobe lusekwe kulwimi lwaseBengali.
Ulwimi lwesiTelugu luyathethwa 82 yezigidi zabantu e-Indiya, malunga ne-7% yabantu bebonke. Siyifumana ngokukodwa kumazwe asezantsi njengeTelangana, iziqithi zeNicobar, Pradesh okanye Andaman.
Inomdla wokuba lolona lwimi kuphela kwinxalenye esempuma yehlabathi onke amagama aphela ngesikhamiso. Kukho indawo enkulu kakhulu yezithethi zaseTelugu eMelika kwaye iyaqhubeka nokukhula.
Inyani eyonwabisayo: Ialfabhethi yeTelugu ithathwa njengonobumba besibini abaphambili emva kweKorea.
Ipesenti efanayo yamaIndiya athetha olu lwimi, isiMarathi. Nangona eIndiya kuthethwa ngeenxa zonke 72 yezigidi zabantu Kukholelwa ukuba ukongeza abantu abangengawo amaIndiya kukho malunga nezigidi ezingama-90 zizonke.
IsiMarathi siyathethwa eGoa, Daman, Maharashtra, Dadra, Diu naseNagar Haveli. Uninzi lwamagama akhe luvela kwisiPersi, isiUrdu, nesiArabhu. Eyona nto ibalulekileyo, kula maxesha okubandakanywa kunye nokugxekwa nohlaziyo kwiilwimi eziphilayo, kukuba isiMarathi sine inkqubo ezintathu zesiniewe, hayi ezimbini. Kukho i-neuter engengowasetyhini okanye eyindoda.
Kuqikelelwa ukuba zikhona AmaIndiya angama-61 ezigidi Ukuthetha isiTamil, yi-6% yabemi belizwe. IsiTamil sithathwa Olunye lweyona lwimi zidala emhlabeni, ekubeni imvelaphi yayo ilandelwe emva kwi-500 BC
IsiTamil sithethwa kwiindawo zaseAndaman, iziqithi zeNicobar, isiTamil Nadi, iKerala kunye nePuducherry.
Kubonakala ngathi olu lwimi luthethwa ngu 55 yezigidi zabantu, Eziza kumela i-4% yabemi baseIndiya. Kukholelwa ukuba lolona lwimi ludala elizweni, nangaphambi kwesiTamil nesiSanskrit. Ukuba kunjalo, iya kuba ngaphezulu kweminyaka engama-2500 ubudala ...
IsiKannada siyathethwa kumazwe aseKerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh naseKarnataka. IKannada inezikhamiso ezingama-34 kunye nezikhamiso ezili-13 kwaye kuphela kolwimi lwaseIndiya olwenziwe ngumphambukeli kwisichazi-magama. Umntu owayephethe yayinguFerdinand Kittel.
Olu lwimi luvela kwimpucuko yase-Indo-Aryan kwaye lumele i-5% yabemi baseIndiya. Ngokufanelekileyo, 52 yezigidi zabantu banayo njengelwimi. I-Urdu iviwe kulo lonke elase-India kodwa ngakumbi kumazwe ase-Bihar, eTelangana, Delhi, Ottar Pradesh, Kashmir nase Jammu.
Ababhali bePunjabi bayaziqonda izithethi zesiUrdu, kodwa izithethi zesiUrdu azinako, kuba ifonology yahlukile. Amanye amagama esiNgesi avela kuUrdu, umzekelo khaki o inkanyamba.
Ithathelwa ingqalelo njengolwimi lwe-Dravidian kwaye ithethwa yi-4% yabemi baseIndiya: Oko kukuthi, Izigidi ezisi-46. Kukholelwa ukuba ibuyela emva kwinkulungwane ye-XNUMX xa yayiqala ukusetyenziselwa intengiselwano yeshishini kwiiakhawunti zebhanki okanye iileta zobungcali kunye namaxwebhu.
Injani lento? Ngaba lelo Gujarati Ngumxube weelwimi ezintathu, isiGujarati uqobo, isiUrdu neSindhi. Wayethetha phi? KuDadra, Nagar Haveli, Daman, Diu naseGujarat.
Kubonakala ngathi uninzi lwamagama kolu lwimi aphela ngo "am". Kuthethwa ngabantu abazizigidi ezingama-33 kwaye oko kubonisa i-3% yabemi belizwe. Ungayiva kumazwe aseKerala, eLakshadweep nasePuducherry.
Ngapha koko, eKerala kukho izithili ezili-14 kwaye nganye nganye isebenzisa ulwimi olwahlukileyo lweMalayalam ...
Olunye ulwimi oluthethwa sisi-3% sabemi baseIndiya, kodwa asiyonto incinci leyo: Izigidi ezisi-32. Kuthethwa kakhulu empuma yelizwe, kwi Urhulumente wase-Odisha, Ngaphezulu kweBay yaseBengal.
Lulwimi lwesithandathu oluchongwe njenge ulwimi lwamandulo eIndiya, kuba inembali ende kwaye khange ixutywe kakhulu nezinye iilwimi. Owona mbhalo mdala kwinzondo ususela emva kwinkulungwane ye-XNUMX BC.
Inyaniso yileyo Uninzi lwamaIndiya luthetha iilwimi ezininzi kunye nesiNgesi, kuba balithanga laseBritane ixesha elide kwaye ukuza kuthi ga kulo mhla, isiNgesi siselulwimi olusemthethweni. Ngapha koko, sele ilulwimi lwebhulorho phakathi kwabemi basemazantsi nasenyakatho yelizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ezona lwimi zibalulekileyo eIndiya
Igama lam ndinguHindu, lithetha isithixokazi sothando nobulumko.Andazi ukuba utata undinike ntoni, into endiyaziyo kukuba amadoda alommandla wehlabathi ayandithanda kakhulu.
NdinguSalima wasePanama, ilizwe lam linabemi abazizigidi ezithathu, apha akukho namnye kum ndiyazi ukuba balapho okanye naphina emhlabeni apho bafudukela khona
UJuanita Guadalupe sitsho
ke bawo zonke iikhomenti ke zibeke !!!!!!!!!!!!!
Phendula ujuanita guadalipe
eBritni guadeloupe sitsho
Ukuba uluvo lwakho luyandinceda, kodwa ndifuna ukwazi ukuba zeziphi izinto ezisetyenziswayo ukwenza yonke le nto!
Phendula u britni guadalupe
UCarlos Guevara sitsho
Phendula uCarlos Guevara
Isidlo sakusasa esiqhelekileyo e-Italiya eRoma
UCasa Batlló kunye neminye imisebenzi emikhulu yobungqondi uGaudí onokundwendwela